China Sodium Sulfite Ukwenziwa kunye Factory | Isihloko
Inkangeleko kunye nembonakalo: mhlophe, yikristale enye okanye umgubo.
Indawo yokunyibilika (℃I-150 (ukubola kokulahleka kwamanzi)
Ubuninzi bezihlobo (amanzi = 1): 2.63
Ifomula yeMolekyuli: Na2SO3
Ubunzima beMolekyuli: 126.04 (252.04)
Ubunyibilikisi: Unyibilikile emanzini (67.8g / 100 mL (amanzi asixhenxe, 18 °C), awunakunyibilika kwi-ethanol, njl.
Indawo yokunyibilika (℃): 150 (ukubola kokulahleka kwamanzi)
Ubunyibilikisi: Unyibilike emanzini (67.8g / 100 mL (amanzi asixhenxe, 18 ° C), angenakunyibilika kwi-ethanol, njl.
Isodium Sulfite idityaniswa ngokulula kwaye idityaniswe ne-sodium sulfate emoyeni, Ukuphulukana namanzi e-crystalline kwi-150 ℃ .Emva kobushushu, iyanyibilika ibe ngumxube we-sodium sulfide kunye ne-sodium sulphate. Ukuxinana kwento engenamanzi yi-2.633. I-hydrate kwaye ayinalo utshintsho kumoya owomileyo. Ukubola kobushushu kunye nokuveliswa kwesodium sulfide kunye nesodiyam sulphate, kunye nokubola okunamandla kweasidi kwiityuwa ezihambelanayo kunye nokukhulula isalfure dioxide. Isodium sulfite inokuncitshiswa okunamandla, kwaye inokunciphisa ion zethusi kwii-cuprous ion ( Isulfite inokwenza izakhiwo kunye nee-cuprous ion kunye nokuzinzisa), kwaye inokunciphisa i-oxidants ezibuthathaka ezifana ne-phosphotungstic acid.Sodium sulfite kunye ne-hydrogen ityuwa yayo ingasetyenziselwa ukususa i-peroxides yezinto ze-ether elabhoratri (yongeza inani elincinci lamanzi, uvuselele ukuphendula ngobushushu obuncinci kunye nokwahlulahlula ulwelo, umaleko we-ether womile ngekalika ekhawulezileyo, ngenxa yokuphendula okuthile kunye neemfuno eziphantsi) inokuthotywa nge-hydrogen sulfide.
Icandelo le-equation reaction:
H2SO3 + Na2CO3 = = = bhala Na2SO3 + CO2 + H2O
2 nahso3 = = delta = = Na2SO3 + H2O + SO2 bhala
3 na2so3 hno3 + 2 + 2 = = = = 3 na2so4 akukho bhala + H2O
Isisombululo se-sodium carbonate sifudunyezwe ukuya kwi-40 ℃ kwaye sigcwaliswe yisalfure dioxide, emva koko kongezwa isixa esifanayo sesisombululo se-sodium carbonate, kwaye isisombululo sidityaniswa phantsi kwemeko yokuphepha ukunxibelelana nomoya.
IIMETYU EZINZIMA (AS PB):
1. Emva kokunyibilika, ukucacisa kunye nokusebenza kakuhle kokucoca, isalfure yongezwa kwiziko lesalfure ngempompo yesalfure.
2. Emva kokuba umoya ucinezelwe, womile kwaye ucocekile, iziko lesulfure liyatshiswa kwaye isalfure itshisiwe ukuvelisa igesi ye-SO2 (igesi yomlilo).
3. Irhasi yeziko ipholile yimbiza yenkunkuma ukubuyisa umphunga, emva koko ungene kwi-reactor desulfurization. I-sublimation sulphur erhasi iyasuswa, kwaye igesi emsulwa ene-20.5% yomxholo we-SO2 (umthamo) ifunyenwe, emva koko ingene kwinqaba yokufunxa.
4, isoda enoxinzelelo oluthile lwe-lye, kunye ne-sulfur dioxide yokusabela kwegesi ukufumana isisombululo se-sodium bisulfite.
5, isisombululo se-sodium sulfite hydrogen sodium yi-caustic soda neutralization ukufumana isisombululo se-sodium sulfite.
I-6, isisombululo se-Sodium sulphate kwisithombisi, kusetyenziswa isiphumo esiphindiweyo inkqubo yoxinaniso.Amanzi aphuma umphunga kwaye kufunyanwa ukumiswa okuqukethe amakristali e-sodium sulfite.
7. Beka izinto eziqwalaselweyo ezijolise kwicentrifuge ukuqonda ukwahlukana okuqinileyo. I-solid (i-sodium sulfite emanzi) ingena kwisomisi somoya, kwaye imveliso egqityiweyo yomiswa ngumoya oshushu.
Oomama botywala buphinda busetyenziswe kwakhona kwitanki yokuhambisa ialkali ukuze iphinde isetyenziswe kwakhona.
Uneminyaka engaphezu kwe-10 yamava obuchule kwimveliso yeSodium Sulfite;
Iingozi zempilo: emehlweni, kulusu, kwinwebu yangaphakathi.
Ubungozi bendalo esingqongileyo: iingozi kwindalo esingqongileyo, zinokubangela ungcoliseko kumanzi.
Ingozi yokuqhuma: imveliso ayinakutsha kwaye iyacaphukisa.
Amanyathelo oncedo lokuqala
Ukuqhagamshelana nolusu: susa impahla engcolileyo kwaye uhlambe ngamanzi amaninzi.
Ukudibana kwamehlo: Phakamisa iinkophe uze uhlambe ngamanzi abalekayo okanye ityuwa.
Ukuphefumla: kude nendawo ukuya kumoya omtsha.Nika ioksijini ukuba kunzima ukuphefumla, yiya kugqirha.
Ukungenisa: sela amanzi afudumeleyo ngokwaneleyo ukukhuthaza ukugabha. Yiya kugqirha.
Amanyathelo olawulo lomlilo
Iimpawu ezinobungozi: akukho mililo ikhethekileyo yokutsha kunye neempawu zokuqhuma.Ukubola okuphezulu kwe-thermal kuvelisa umsi onetyhefu wesulphide.
Imveliso yokutsha eyingozi: iSulphide.
Indlela yokucima umlilo: Abasebenzi bomlilo mabanxibe iimpahla zomlilo ezipheleleyo-ukucima umlilo, ukucima umlilo kwi-upwind. Xa ucima umlilo, susa isikhongozeli kude kangangoko kwindawo yomlilo uye kwindawo evulekileyo.
Impendulo engxamisekileyo yokuvuza
Unyango olungxamisekileyo: khetha indawo engcolileyo yokuvuza kunye nokuthintela ukufikelela. Kucetyiswa ukuba abasebenzi bakaxakeka banxibe iimaski zothuli (ikhava epheleleyo) kunye nezuti zerhasi. Thintela uthuli, tshayela ngononophelo, faka iingxowa kwaye udlulisele kwindawo ekhuselekileyo. Hlamba ngamanzi amaninzi kwaye uhlanjululwe kwinkqubo yamanzi amdaka Ukuba kukho isixa esikhulu sokuvuza, gubungela ngeeplastiki kunye ne-canvas.Collect, recycle or transport to site to disposal site for disposal.
Ukulahlwa kokusebenza kunye nokugcinwa
Amanyathelo okhuseleko: ukusebenza ngokungenisa umoya, ukomeleza umoya wokungenisa umoya.Abaqhubi kufuneka baqeqeshwe ngokukodwa kwaye balandele ngokungqongqo iinkqubo zokusebenza.Abasebenzi bayacetyiswa ukuba banxibe iimaski zokucoca ulwelo, banxibe iiglasi zokukhusela imichiza, banxibe iiovaroli zokuthintela ityhefu, kwaye banxibe iiglavu zerabha .Ukuthintela uthuli.Ukuthintela ukudibana ne-asidi.Phatha kancinci ukuthintela ukupakisha umonakalo.Uxhotyiswe ngesixhobo sokuvuza esingxamisekileyo.Izikhongozeli ezinophawu zinokugcina izinto eziyingozi.
Amanyathelo okugcina: Gcina kwindawo epholileyo, enendawo yokugcina umoya, gcina umlilo nobushushu, kufuneka yahlulwe kwi-asidi nakwezinye izinto zokugcina, musa ukudibanisa ukugcinwa, sukuhlala ixesha elide, indawo yokugcina iya kubonelelwa ngezinto ezifanelekileyo zokugcina ukuvuza.
Ulawulo lokunxibelelana / ukhuseleko lomntu
Ulawulo lobunjineli: inkqubo yemveliso ivaliwe, kwaye umoya uyangeniswa.
Ukukhuselwa kwenkqubo yokuphefumla: xa uthuli emoyeni ludlula umgangatho, kuya kufuneka unxibe isifihlakali sokucoca ulwelo lokuzikhupha kwimeko yohlangulo olungxamisekileyo okanye ngobungxamo, isiphefumli somoya kufuneka sinxitywe.
Ukukhusela kwamehlo: nxiba iiglasi zokhuseleko lweekhemikhali.
Ukukhuselwa komzimba: nxiba iimpahla zokuthambisa ezinetyhefu.
Ukukhuselwa kwesandla: nxiba iiglavu zerabha.
Olunye ukhuseleko: tshintsha iimpahla zomsebenzi ngexesha.
Uzinzo kunye nokusebenza kwakhona
Iimpawu ezingavumelekanga: i-asidi eyomeleleyo, i-aluminium, ne-magnesium.
Iimveliso zokubola: isalfure dioxide kunye nesodium sulfate
Ezinye iziphumo eziyingozi: into iyingozi kokusingqongileyo, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ungcoliseko lwamanzi.
Amanyathelo okhuseleko kwezothutho: Ukupakisha kufuneka kugqityiwe kwaye ukulayishwa kufanele ukuba kukhuseleke.Qiniseka ukuba isikhongozeli asivuzi, singawi, asiweli okanye sonakalise ngexesha lokuhamba, akuvumelekanga ngokungqongqo ukuba kuxutywe neeacidi kunye neekhemikhali ezityiwayo. Ukuvezwa lilanga, imvula kunye nobushushu obuphezulu Isithuthi kufuneka sicocwe kakuhle emva kokuhamba.
Egqithileyo Isodium Metabisulphite
Okulandelayo: Isodium Bromide
IHydrosulfite De Sodium
IHydrosulfite De Sodium, IHydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Natrium Hydrosulfite, Isisombululo seCalcium Bromide, Ulwelo lweCalcium Bromide,